I-Mastodon: Enye indlela yamahhala, evulekile neyesimanje ku-Twitter | Kusuka kuLinux
IMastodon: Enye indlela yamahhala, evulekile neyesimanje ku-Twitter
Lezi zikhathi zobhadane lomhlaba jikelele ngu I-COVID-19 (Coronavirus 2019 / SARS-CoV-2), ingezwe kumicimbi engapheli nezenzo, okuhloswe ngazo ukuthinta i- ukungathathi hlangothi okuphelele, kwezepolitiki, ezenhlalo, ezempi, ezomnotho (ukuvinjelwa, unswinyo); by Ohulumeni noma Izinkampani kwabanye oHulumeni, Abantu kanye Nemiphakathi; nsuku zonke abasebenzisi abaningi be Inethiwekhi Ye-Intanethi Yomhlaba, bayashukunyiswa noma baphoqelelwe ukufuna izindlela zokuxhumana, kusekelwe noma kusekelwa yi amapulatifomu wokuxhumana wamahhala, avulekile kanye / noma asabalalisiwe, ukuthola umthombo ongcono noma umzila wolwazi kanye / noma izindaba.
Y I-mastodon ingenye yalezo ezinye izindlela kumahhala, kuvulekile futhi / noma kwehliswe amandla itholakalela leyo njongo. Yize, ikakhulukazi Izimbangi zeMastodon iTwitter, empeleni iyingxenye ye-ecosystem enkulu egcwele izici eziningi noma izinzuzo eziningi. Ngakho-ke, izikhathi eziningi kubhekwa njenge- Inethiwekhi yokuxhumana nabantu ephikisana noFacebook.
Como I-mastodon, kukhona namanye amanethiwekhi omphakathi kanye / noma amapulatifomu esevisi kumahhala, kuvulekile futhi / noma kwehliswe amandla, ezingasetshenziswa kalula ukufuduka kumanethiwekhi omphakathi aziwayo futhi agcwele kanye / noma amapulatifomu esevisi, ayimfihlo futhi avaliwe esisebenzisa kakhulu.
Ukukhuluma nje ezimbalwa, sinakho I-Discord, esesike sakhuluma ngayo kwezinye izikhathi, kushicilelo olubizwa ngokuthi: "IDisroot: Ipulatifomu yamahhala, yangasese nephephile yezinsizakalo eziku-inthanethi". Singasho futhi I-PeerTube u I-OpenTube ukufaka esikhundleni YouTube, a Ukuhlakazeka, Umngane o Imvuthuluka ukufaka esikhundleni Facebook, ngaphezu kwalokho I-PixelFed y I-Piconic ukufaka esikhundleni Instagram.
Ngaphezu kwalokho, sincoma ukufunda mayelana Amanethiwekhi asetshenzisiwe kanye namaseva azimele y Izinhlelo zokusebenza, izincwadi ezihambisana nalezi zihloko. Futhi-ke, awukwazi ukuphuthelwa izincomo zethu zokuzifaka esikhundleni I-WhatsApp ngeTelegram noma ngeSignal.
1 I-Mastodon: Inethiwekhi yokuxhumana yamahhala, evulekile neyesimanje
1.1 Ukubhaliswa kanye Nomnikelo
I-Mastodon: Inethiwekhi yokuxhumana yamahhala, evulekile neyesimanje
Njengoba isithombe esingenhla kombhalo sisikhombisa, esathathwa ngesikhathi kwenziwa lokhu kushicilelwa, IMastodon iyiMicroblogging Social Network lokho kunakho Abasebenzisi be-512.488, ezishicilele ngaphezu kwe- Izigidi ezingama-21 zithi noma i- «Tooteos».
Noma kunjalo, kukodwa I-Mastodon iwebhusayithi esemthethweni Bayazithuthukisa futhi bachaze ngemiyalezo elandelayo:
"Landela abangane bakho bese uthola okusha kubantu abangaphezu kwezigidi ezingu-4,4. Thumela konke okufunayo: izixhumanisi, izithombe, umbhalo, ividiyo. Konke kungxenyekazi ephethwe ngumphakathi futhi engenazikhangiso".
"Ngokufana nokuthi ukubhloga kuyisenzo sokuthumela izibuyekezo kuwebhusayithi, i-microblogging isenzo sokuthumela izibuyekezo ezincane ekusakazweni kwezibuyekezo kuphrofayela yakho. Ungashicilela okuthunyelwe kombhalo futhi unamathisele ngokuzithandela imidiya enjengezithombe, umsindo, ividiyo, noma izinhlolovo. IMastodon ikuvumela ukuthi ulandele abangane bakho bese uthola okusha".
Ukuqala ukwazi nokusebenzisa injabulo Inethiwekhi Yokuxhumana singafaka isixhumanisi esilandelayo Joyina iMastodon futhi ngaleyo ndlela siqale ukuba yingxenye yoMphakathi omkhulu kangaka. Futhi noma imiphi imibuzo, ungangena ku- Isigaba Semibhalo Esisemthethweni noma ufunde hhayi kanjalo okuthunyelwe kwethu okudala mayelana neMastodon, lapho singena khona ngokuningiliziwe.
Ukubhaliswa kanye Nomnikelo
Khumbula ukuthi lapho ubhalisa, unohlu lwamaseva angaphansi kwenethiwekhi, nokuthi kungenzeka ukhethe ifayela le- ingqikithi nolimi ufuna ukumisa. Lezi zinhlu zivame ukukhombisa inani labasebenzisi abanalo. Phakathi kwala maseva kukhona okwaziwayo "Mastodon.social", okuyi-server yokuqala ukwakhiwa kungxenyekazi yomphakathi.
Futhi ekugcineni, ungakhohlwa, noma ngabe ungumuntu, inhlangano noma uhulumeni, nikela kuphrojekthi iMastodon noma ukusebenzisana nengqalasizinda, ukuze iqhubeke futhi ikhule, kusizakale wonke umuntu.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Mastodon», okungenye yezimbalwa «Redes Sociales libres y abiertas» ekhona ku-Intanethi; ivumela abaningi ukubazi futhi / noma babe yilungu labo ukuze bakwazi ukukhulisa ukusetshenziswa kwabo futhi basebenzise inzuzo yabo uma kuqhathaniswa nokufana kwabo «Redes Sociales privativas y cerradas»; ngaphandle kokuba, okuningi inzalo nokusetshenziswa, Kuwo wonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IMastodon: Enye indlela yamahhala, evulekile neyesimanje ku-Twitter
Ubuntu 20.04 "Focal Fossa" beta isiyatholakala ukuze ihlolwe
Ukusondeza akusekeli ukubethela kokuphela kokuphela